Shirkii Horumarinta Qorshaha Qaranka Oo Lagu Soo Gabagabeeyay Baydhabo – Goobjoog News
Shirkii Horumarinta Qorshaha Qaranka Oo Lagu Soo Gabagabeeyay Baydhabo
Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay waxaa lagu soo gabagabeeyay shirka Horumarinta Qorshaha Qaran 2017 illaa 2019, waxaana ka qeybgalay mas’uuliyiin ka socotay wasaaradda Qorsheynta xukuumadda Soomaaliya iyo wasiirada Qorsheynta ee maamul goboleedyada dalka.
Shirkaan ayaa waxaa looga hadlay arrimo badan oo ah horumarinta qorshaha Qaran, iyadoo dhammaan mas’uuliyiintii ka qeybgashay ay ka aragti dhiibteen.
Wasiir Ku xigeenka Wasaaradda Qorsheynta iyo Iskaashiga Caalamiga ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Sheekh Cali Qalloocow oo wareysi siiyey Goobjoog News ayaa sheegay inay ku dadaali doonaaan sidii loo dhameystiri lahaa qorshaha qaran ee loogu talogalay in lagu soo celiyo Kaabayaashii dhaqaalaha ee dalka uu lahaa.
Waxa uu tilmaamay in shirkan Baydhabo kusoo dhammaaday uu yahay mid dhabaha u furi doonaan sidii loo heli lahaa Horumarinta iyo qorshaha dhabta ah.
Wasiir ku xigeenka ayaa hoosta ka xarriiqay in wasaaradda ay sameyn doonto sidii caalamka u ogaan lahaa in dalka uu ka jiro isbedal dhanka qorshaha ah.
Fursado Shaqo Banaan